Kudiridza kwekumba kudiridza: hunhu, zvakanakira uye maitiro ekuzviita | Green Renewables
Drip kudiridza ndeimwe yeakaomesesa masisitimu aripo parizvino ekurima. Tese isu tine gadheni kana gadheni rekumba tinoda kuti ribudirire mumamiriro akanaka. Naizvozvo, tinogona kugadzira kudiridza kumba zvinobudirira. Ndiyo imwe yemadiridziro anonyanya kushanda aripo uye anogona kugadzirwa pamba nezvinhu zvatisingawanzoshandisa.
Munyaya ino tiri kuenda kukuudza sei unofanira kuvaka yako pachako donhwe kudiridza uye chii zvakanakira.
1 Zvakanakira kudiridza
2 Kumba kudonhedza kudiridza masystem
2.1 Mabhodhoro ane buri
2.2 PVC chubhu kana tambo pane chivharo
2.3 Bhodhoro mune tsvina isina chivharo
2.4 Solar Kumba Drip Kudiridza
Tiri kuenda kuona mumwe nomumwe zvakanakira donhwe kudiridza:
Kubudirira: evaporation yemvura, pamusoro pemvura uye pakadzika pecolation zvinoderedzwa uye zvinobviswa kana tikashandisa yekudonhedza system. Uye ndeyekuti kana yakagadzirirwa zvakanaka, ikachengetedzwa uye ichichengetedzwa ine 95% inoshanda. Uye zvakare, zvinobatsira kuisa zvidiki zvemadiridziro izvo zvinogona kubvumidza sarudzo dzinoshanda pamusoro pekugadzira.
Mwaka wekurima: muzvirimwa zvakaganhurwa zvakanyanya pane chidimbu chidiki chevhoriyamu yevhu inogona kunyoroveswa kudzikisira kurasikirwa nemvura kusiri madikanwa kana ichidiridzwa.
Dzivisa kwakadzika kwemvura uye zvinovaka muviri. Kana isu tikadiridza nemadonhwe, zvinovaka muviri hazvisvinudzirwe muzvikamu zvakadzika. Izvi zvakakosha zvakanyanya kana tichida kuchengetedza ivhu redu nezvirimwa zviine hutano.
Kufanana kukuru mukushandiswa kwemvura: neidrip irrigation tinovandudza kufanana kwese kudiridza uye kunogona kukonzera kudzora kuri nani kwemvura, zvinovaka muviri uye mamineral salt.
Wedzera kugadzirwa: Kune akasiyana masystem anobatsira anobatsira kuwedzera kugadzirwa uye kugadzikana kwezvirimwa mukutarisana nemamiriro ekunze akasiyana.
Inovandudza hutano hwezvirimwa: Nekuda kwerudzi urwu rwemadiridziro, kune mashoma zvirwere zvine chekuita nefungus zvinoitika nekuda kwezvirimwa zvakasvava.
Kuvandudza mukutungamira kwefetiraiza nemishonga yekuuraya zvipuka: Izvi zvinotibata zvakanyanya kana tichida kuve negadheni repamba rekumaguta risina kana chairo rekushandisa mafetiraiza ekugadzira uye mishonga yekuuraya zvipuka.
Kudzora masora zviri nani: Drip kudiridza kunobatsira kudzikisa huswa kumera nekukura nekuti mvura yakanangana nezvirimwa. Izvo zvinobatsira zvakare kudzikisa zvakanyanya ese masora ekudzivirira.
Iyo inobvumidza kugadzira goho repiri: Nekuda kweiyi imba yekudonha kudiridza system, inobvumidza kudyarwa kwechipiri chirimwa uye nekuvandudza mikana yekugadzira.
Mashandiro: kudiridza kunogona kugadzirwa kuti usanyatsoziva goho.
Simba rekuchengetedza: Chero kuchengetwa kwemvura kuchaderedzawo chero mari yesimba.
Nguva refu: Ngatirege kukanganwa kuti imba yekudiridza yemumba kana yekudonha inogona kuva nehupenyu hwakareba kana yakagadzirirwa zvakanaka.
Kumba kudonhedza kudiridza masystem
Chokwadi mazuva ese isu tinorasa huwandu hukuru hwemabhodhoro epurasitiki ayo asisina basa. Aya mabhodhoro anogona kushandiswa kugadzira yakapfava yekuzvigadzirira yekudonhedza system. Isu tinongoda bhodhoro rakakura sezvinobvira kuti riite chinzvimbo chepamusoro, chinhu chakapinza, netambo dzakatetepa kana machubhu. Nemashoko aya unenge uine zvese zvaunoda kuti ugone kugadzira yako yekudonha yekudiridza system.
Ngatione kuti ndeapi akasiyana akasiyana aripo:
Mabhodhoro ane buri
Inosanganisira kugadzira maburi muvharo rebhodhoro nekucheka chikamu chayo chepasi nekuchipinza chakakotamira pasi muvhu, padyo. Tinofanira zvakare kubatanidza hosipaipi mhando ine yakaderera mvura kumanikidza. Iyo sisitimu inoshanda uye inobatsira, kunyanya kana iwe uchizove usiri pamba kwenguva yakareba.
PVC chubhu kana tambo pane chivharo
Tinogona zvakare kugadzira dhizaini yekugadzira yekudiridza yekumba nekuita buri muhombodo uye nekuisa tambo yekuzadza bhodhoro remvura. Iyo yakarongeka zvakakwana iyo inotibatsira kuchengetedza yakawanda mvura sezvo ichiita kuti midzi ipinze mvura zvishoma nezvishoma.
Bhodhoro mune tsvina isina chivharo
Iyo ndeimwe yenzira dziri nyore uye dzinoshanda kwazvo. Isu tinongofanirwa kugadzira maburi madiki mubhodhoro, bvisa kapu uye isa pasi muvhu yakatwasuka. Nekuda kweizvi, tinogona kutora bhodhoro remvura ndokumirira pano zvishoma nezvishoma kudiridza zvirimwa zvedu. Iwo musiyano weiyo imba yekudonha yekudiridza system iyo inonakidza kwazvo kushandisa mumabindu uye muvhu rebindu repamba.
Solar Kumba Drip Kudiridza
Sisitimu iyi yakati rebei uye tiri kuzoshandisa simba rezuva kuiitira. Zviri nyore kugadzira uye zvinotibvumira kuchengetedza yakawanda mvura. Kuti tiite izvi, tinofanirwa kushandisa mabhodhoro maviri emvura, hombe imwe inokwana malita mashanu kana kudarika uye diki ringave 5 litita. Tichaenda nhanho nhanho tichitsanangura zvese zvaunofanirwa kuita kuti ugadzire iyi yekugadzira yekudiridza.
Isu tinotora bhodhoro hombe ndokuricheka pazasi, nepo iro diki richichekwa nepakati.
Chikamu chepazasi chebhodhoro diki ndicho chinoshandiswa kuisa zvakananga pasi. Iyo hombe ichaiswa pamusoro nenzira yekuti, kana iwe ukavhura chivharo chehombodo hombe, mvura inodyiswa pane diki.
Mabhodhoro ese ari maviri anozoiswa padyo nemuti watiri kuda kudiridza. Daro harifanire kunge rakanyanyisa kureba zvekuti hapana mhando yekumhanya inosara. Iko kusakosha kwerudzi urwu rweimba yekudonhera nzira yekudiridza ndeyekuti haisi kushanda kana ivhu riine materu.
Iyo sisitimu inoshandisa simba rinobva kuzuva kupwa mvura uye nekuinangisa kwatinonyanya kufarira. Kana mwaranzi yezuva yakanangiswa kune bhodhoro system, tembiricha yemhepo inokwira, ichikonzera mvura kubuda. Shure kwaizvozvo, mweya uri mukati memabhodhoro uchazadza hunyoro uye mvura inonamira pamadziro emabhodhoro. Sezvatinoziva, madonhwe emvura anokura uye akakura munzvimbo mune kuenderera kwemvura kuri kuenderera. Sezvo pavanokura, vanorema zvakanyanya uye vanoguma votsvedza nemadziro emabhodhoro kusvikira vazoparadzira pasi rakavakomberedza.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve maitiro ekugadzira imba yekudonhedza yekudiridza system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Kudiridza kwekumba kudiridza
Fly inoshanda munzvimbo yezvisikwa